Soo dejisan EaseUS Todo Backup 12 – Vessoft
WindowsNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaEaseUS Todo Backup
Bogga rasmiga ah: EaseUS Todo Backup
EaseUS todo kaabta – fudud ah si ay u isticmaalaan software in gurmad. software The u saamaxaaya in ay gurmad nidaamka qalliinka ay ka mid yihiin codsiyada iyo goobaha hadda. EaseUS todo kaabta taageertaa socdaalka iyo cloning sifooyinka of drive ah si ay u gudbiyaan xogta si drive kale adag. software ayaa kuu ogolaanaya in ay gurmad drive oo dhan iyo qaybaha ay gooni ah, galalka iyo faylasha loo baahdo. EaseUS todo kaabta ayaa qalabka si ay u abuuraan image ah drive adag oo soo kabsado nidaamka ay dhacdo xaalad lama filaan ah.
Kaabta ee nidaamka qalliinka ku SDD iyo HDD
Kaabta of drive adag oo loo doortay files
Recovery of nidaamka qalliinka
Cloning iyo abuuridda of images disk ah
Taageerada ugu drives Downlaods
Soo dejisan EaseUS Todo Backup
Faallo ku saabsan EaseUS Todo Backup
EaseUS Todo Backup Xirfadaha la xiriira